Ngaphezulu kwe-13years iimveliso ezintsha eziphuhlisayo kunye neemodeli ezindala ezinyusayo, kukho iintlobo ezingaphezu kwe-20 zeemodeli zesicelo esahlukileyo. Iimveliso eziphambili zeXIKOO zibandakanya umoya opholileyo opholileyo, opholileyo womoya opholileyo, opholileyo womoya wefestile, opholileyo womoya we-centrifugal, i-solar DC epholileyo yomoya kunye neendawo ezipholileyo zomoya ezisetyenziselwa ikhaya, iofisi, iivenkile, isibhedlele, izitishi, intente, indlu eluhlaza, ivenkile yokutyela, indawo yokusebenzela, indawo yokugcina izinto kunye nezinye iindawo.
Ukusebenza okuphezulu Thenga umoya opholileyo- XK-75C ifestile yentlango evaporative umoya opholileyo fan-XIKOO
XK-75C ifestile entlango komphunga umoya opholileyo fan - XIKOO
I-XK-05SY epholileyo yelanga ye-DC yomoya opholileyo-i-XIKOO
Phakathi kwezixhobo zokupholisa izityalo, zininzi izinto ezichaziweyo kunye neemodeli zokuphola komoya okonyukayo, iimodeli ezahlukeneyo kunye nokubalulwa, ukusebenza kwexabiso eliphezulu kwintengiso yentengiso, kunye noluhlu olubanzi lwezicelo. Isixhobo sokupholisa isityalo esinokukhetha okuphezulu. Njengeshishini elidala lophawu ...